Mety amin'ny alika ve ny akondro? Jereo !! | Alika Manerantany
Afaka mihinana akondro ve ny alika?
Tsy misy isalasalana fa ny iray amin'ireo voankazo malaza indrindra eran'izao tontolo izao dia ny akondro, izay ankoatry ny fananana mamy manokana sy tsiro mahafinaritra, sakafo manome tombony be ho an'ny olombelona izy io.
1 Afaka mihinana akondro ve ny alika?
2 Ny tombotsoan'ny akondro ho an'ny alika
2.2 Otrikaina B6
2.4 Probiotika voajanahary
3 Contraindications an'ny banana
3.1 Mety hiteraka fitohanana
3.3 allergie na tsy fahazakana
Afaka mahita an'io voankazo io manerana ny planeta isika, ary amin'ny fomba samihafa no iantsoana azy, toy ny akondro, akondro na akondro Ary toy ny mahasoa sy ny habetsaky ny angovo ho an'ny androntsika izao, dia mety ho an'ny zavaboary hafa tena akaiky antsika toy ny alika koa.
Araka ny fantatsika, tsy ny sakafo rehetra azontsika laniana amin'ny maha-karazany antsika dia mety ihany koa ho an'ny biby fiompintsika, saingy marina ve fa ny alika dia afaka mihinana akondro ary manome tombony lehibe ho azy ireo aza?
Ny potasioma, loharanon-kery lehibe iray, nanampy vitamina sy prebiotika sasany ananan'ny voankazo akondro dia tsara ho an'ny olombelona tahaka ny an'ny alika, ary izany no antony hampianarana anao amin'ity lahatsoratra ity ny maha-zava-dehibe ny alika mihinana akondro amin'ny fiasa samihafa amin'ny vatany, manome anao angovo ho an'ny fiainanao isan'andro sy mamahana azy amin'ny fomba tsara. Voankazo tena mendri-kaja izay hankasitrahan'ny alika anao raha manome azy ianao.
Alohan'ny hiresahana anao manokana momba ilay akondro, dia te hilaza aminao izahay fa amin'ny tontolon'ny voankazo sy legioma dia afaka mahita tranga tsy manam-petra ianao izay, miaraka amin'ny tena ankasitrahana izy ireo ho an'ny olombelona dia natao ho an'ny alikantsika sy biby hafa koa ireo.
Na ahoana na ahoana, dia mazava fa tsy afaka mamadika ny alikanao ho mpihinan-kena ianao, fa ny voankazo sy legioma sasany azo ampiasaina hamenoana sy hanome tombony sasany ny biby fiompinao, fa ho an'ny sakafo isan'andro dia tokony hanohy amin'ny anjara asan'ny tavy sy proteinina ianao fa mila salama tsara sy mahatsapa fahafaham-po.
Fa indrindra ho an'ny alika, fihinanana voankazo antonony hanome vitamina sy mineraly, izay hanampy anao handrakotra ny tsy fahampiana izay matetika ananany ao amin'ny vatanao.
Tsy fanontaniana fa, rehefa mamaky an'ity ianao dia manomboka manome karazana voankazo ho tsy misy dikany, fa amin'ny fitsipika dia tokony ho hitanao hoe inona ny karazana voankazo ao anatin'ireo izay atoro anao dia ireo izay tian'ny alikanao ny ankamaroany ary tokony ho raisinao ihany koa fa ny alikanao dia mety misy allergy na tsy fandeferana izay hiteraka na dia ny voankazo navela aza, tanteraho ny anjara asa mifanohitra tanteraka amin'ilay tianay hamorona, izay mahasoa ny biby fiompinay.
Tokony hotadidinao fa ny voankazo dia tsy ho soloina ny sakafonao, izany hoe, tsy ho loharanon'ny sakafonao, ity dia ho famenony Azonao atao ny manolotra ny alikanao ho toy ny fitsaboana mamy sy voajanahary, fa ny otrikaina rehetra ilainy tsara dia hita ao amin'ny sakafo mahazatra azy. Ny sasany amin'ireny dia mety lanin'ny alika miaraka amin'ny akorany ary ny sasany kosa tsy, fa ny voankazo tsy misy hoditra ary hokapaina dia mety ho manaikitra farany amin'ny sakafo tsara.
Amin'ireo voankazo rehetra azonao anompoana ny alikanao ho famenony, ny iray amin'ny be mpampiasa sy manintona indrindra ny vatan'ny alika dia ny akondro, fa satria manana tombony be dia be dia be koa ny contraindications, izay matetika misy ifandraisany amin'ny fatra. omena azy ireo. Avy eo dia hasehonay anao ny lisitry ny tombontsoa rehetra mety ho an'ny akondro ho an'ny alikanao.
Ny tombotsoan'ny akondro ho an'ny alika
Amin'ny maha-olombelona anao dia mankafy ny akondro ianao toy ny voankazo iray izay, ankoatry ny matsiro, dia manome tombony maro ho an'ny vatanao ary izany koa dia mitranga amin'ny alika, izay manome azy ireo anjara biriky lehibe, izay hotononinay eto:
Ny singa voalohany mifandray amin'ny akondro dia ny potasioma, tsara ho antsika ary tsara ho an'ny biby fiompintsika, satria hanampy azy hanamafy ny firafitry ny taolany io, noho ny famelan'ny potasioma ny fividianana kalsioma tsara kokoa. Izy io koa dia hitondra tombony amin'ny fanamafisana ny hozatrao sy fanamafisana ny lalan-dranao.
Ity vitamina ity dia hanampy ny alikanao amin'ny fomba maro. Amin'ny voalohany, tena tsara ho an'ny fisorohana ny aretina isan-karazany amin'ny aretim-po ary manatanteraka asa fanoherana ny inflammatoire koa io. Ny sela rà mena dia hahita ny fiasan'io vitamina io koa.
Fantatsika rehetra ny amin'ny anjara birikin'ity vitamina ity ho an'ny olombelona sy ny fomba anamafisany ny hery fiarovantsika, satria toy izany koa ho an'ny alika. Ny vitamina C amin'ny alika koa dia manampy amin'ny fitazonana ny tosidrany ho marin-toerana.
Ny fifehezana ny flora amin'ny tsinay no toetra manandanja indrindra amin'ny fandraisana anjaran'ny probiotika voajanahary amin'ny zavamananaina velona sy amin'ny alika dia midika koa fa tombony ho an'ny rafi-pandevonan-kanina. Izany no antony ny akondro dia mety ho tena manintona raha sendra alika voan'ny fivalananan.
Contraindications an'ny banana
Etsy ambony dia nilaza taminay izahay fa ny fanomezana akondro ny alika dia tsy midika akory fa ny fototry ny sakafony dia iharan'izany na karazana voankazo hafa, satria ny sakafo manankarena amin'ny tavy sy proteinina no hitazomana ny alikanao ho salama tsara. . Ny fanararaotana fihinanana akondro amin'ny alika dia mety hitondra ireto fahasarotana manaraka ireto:
Mety hiteraka fitohanana
Akondro be dia be no mety hahatonga ny biby fiompinao hihasimba ny rafitra fandevonan-kanina voafehy, noho izany ny fitohanana dia iray amin'ireo fahasarotana amin'ny fandevonan-kanina izay mety hipoitra.
Ny tranga mifanohitra tanteraka amin'ilay noresahintsika tamin'ny teboka teo aloha dia mety hitranga ihany koa ary tsy maintsy misy zavatra bebe kokoa noho ny zava-drehetra amin'ny zava-misy fa, araka ny tsapan'ny biby fiompinao fa matsiro tokoa ity voankazo ity, tsy izy no mety indrindra ny zavamiaina ao aminy ary izany dia hiteraka sary fivalanana indray.
Mba hahafantarana hoe inona ny karazan-tsakafo, na any am-potony, na amin'ny famenony, toy ny akondro, dia tsy maintsy manatanteraka ny fandinihana ny biby ianao satria ny alikanao dia mety tsy mahazaka akondro. Manoro hevitra anao ny, amin'ny fotoana voalohany anoloranao azy ireo ity voankazo ity, aryFantatrao ny fihetsika mety hitranga na ny fiovana ateraky ny fihinanana azy ao amin'ny vatanao.
Mamporisika ny dokotera ny fihinanana akondro amin'ny olombelona mba hanomezana angovo bebe kokoa, ohatra, ho an'ireo izay manao fanatanjahan-tena. Izany ve ny akondro dia misy siramamy manome izany angovo izany ary amin'ny alikanao dia hitovy tanteraka izany, ka raha efa mora miasa tsy tapaka izy, mihazakazaka ary mitsambikina, dia mety hiharatsy izany, ary miteraka hyperactivity tsy tapaka an'ny alikao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Afaka mihinana akondro ve ny alika?
Afaka mihinana almond ve ny alika?